Ayax ku habsaday magaalada Jowhar iyo Nawaaxigeeda - Home somali news leader
Home NEWS Ayax ku habsaday magaalada Jowhar iyo Nawaaxigeeda
Ayax ku habsaday magaalada Jowhar iyo Nawaaxigeeda
Ayax faro badan ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu arkay deegaano ka mid ah gobolka Sh/dhexe isagoo ayaxaasi baabi’iyay dalagyo badan.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ayaxan uu ku faafay deegaano badan oo ku kala yaal magaaloyinka Jowhar iyo Mahaday oo dadka ku nool ay badankood yihiin beeralay.
Ayaxa oo aysan markii ugu horeysay ee lagu arko magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa uu ku degey beero ay ku abuuraayeen dalagyo kala gedisan.
Sii hayaha wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim “Daqare”ayaa u sheegey weriye ka tiran jowhar.com in Ayaxan uu yahay mid ku soo laalaabtay deegaano badan oo ka mid ah Hirshabelle.
“Ma awoodno inaan wax ka qabano ayaxan faraha badan leh,waxaan ugu baaqayaa hay’adaha caalamiga ah inay gacan ka geystaan sidii wax looga qaban lahaa ayaxan ku soo laalaabtay HIrshabelle.”ayuu yiri Sii hayaha wasiirka beeraha Hirshabelle.
Ayaxa ayaa dhibaato ku haya wadamo badan oo ku yaal bariga afrika,hase yeeshee ma muuqato dadaal xoog leh oo ay dowlada federalka ka geysanayso sidii wax loogaga qaban lahaa waxyeelada uu ayaxu u geysanayo shacabka.
Next articleTrump says he will not attend Joe Biden’s inauguration on January 20